Fivoriambe fantsom-bozaka Hydrauic tsara indrindra Yb / T4164-2007 Mpanamboatra sy orinasa | Jinxing
Fivoriambe fantsom-bozaka hydrôzika Yb / T4164-2007
Ny fantsom-pandrefesana fantsona roa sosona dia misy fanoherana tsara ny famoahana, fampisehoana avo lenta, tena tsara
fanarenana, fahombiazana miavaka amin'ny fanoherana ny havizanana, fahadiovana anaty anatiny, geometry marina sy ny sisa. fanatanjahan-tena paramete: hery amam-pahefana Rm≥ 290Mpa Vokatry ny vokatra: Rel≥180Mpa Fanamafisana isan-jato aorian'ny tapaka: A ≥ 25% Ny fahadiovan'ny fidirana: Residid≤ 0.16g / ㎡.
Ny halavan'ny ampahan'ny fantsona misongadina eo anelanelan'ny tadin'ny fantsona roa amin'ny fivorian'ny fantsona amin'ny fanjakana mahitsy.
Ho fanampin'ny clamp, sombin-kazo mifamatotra mifatotra amin'ny faran'ny fantson-tsolika.
Mifanaraka maharitra ny tonon-taolana
Ireo fitambaran-tsofa mifampitohy dia hivondronan'ny fanorotoroana na fanesorana ny fitrandrahana mangatsiaka, na soloina ny fantson'ireo lobolobo sy ferrules simba isaky ny averina mivory ilay fantsona.
Fahadisoana izay mahatonga ny fantson-tsolika hiavaka amin'ny fantsom-piraisana na ny fivoahana.
Manondro fantsom-pandefasana fantsona miovaova:
a) Izy io dia mpampitohy eo anelanelan'ny fantsom-by ao amin'ny rafitra famatahana;
b) Tsy ilaina ny mitambatra fantsona mandritra ny fametrahana;
c) Rehefa mivory, ny lavany tsy zakan'izy ireo dia ambany noho ny halavan'ny ampahany misy ny fantsom-by.
1) Ny fivorian'ny fantsona ampiasaina amin'ny fitsapana dia tokony ho vaovao ary tokony ho antitra mandritra ny 24 ora farafahakeliny. Tazomy ny fivorian'ny fantsom-panafana amin'ny hafanana 15-32 ° C mandritra ny adiny 4 farafahakeliny alohan'ny fitsapana;
2) Ho an'ny fivorian'ny fantsom-panafody ho an'ny fitsapana havizanana amin'ny fihenan'ny hafanana sy ny fanandramana fanoherana ny hafanana ambany, ny kojakoja rehetra, toy ny fehin-tariby vy, ny fonon'ny fingotra, sns dia tsy maintsy esorina alohan'ny hametrahana azy amin'ny fitaovana fitiliana.
3) Afa-tsy ny fitsapana fanoherana ny hafanana avo, ny fitsapana ny fanoherana ny hafanana ambany, ny fitsapana ozone ary ny fitsapana fanoherana ny harafesina amina fantsona, ny fitsapana hafa dia tsy maintsy atao amin'ny hafanan'ny efitrano 15-32 ° C.
Teo aloha: Vacuum freins Hose (fenon'ny GB16897-2010)
Manaraka: Nylon Air freins Hose
Fantsona Hydraulika mirandrana
Tariby mandeha amin'ny tariby mifono vy